နိုင်ငံတကာ | Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
No-Hassle Plans For Motivating Teachers - StraightForward Advice - Writion
By namwahl 2933 days ago on နိုင်ငံတကာ from www.writion.net
What is personal development but your ability to enjoy life?
Every talent or skill that you develop, enriches your life. First, comes the thrill of learning to play the piano or playing the position of goalie at soccer.
Facebook - Ohio Wrongful Death Lawyer Who Sues For Your Ohio Wrongful Death Claim
By johnicsam 2933 days ago on နိုင်ငံတကာ from www.youtube.com
Interesting site about several things. Visit us and you'll maybe not regret. A wrongful dying scenario isacase exactly whereaman or woman dies thanks to the intentional or negligent act of an additional, or entity. http://www.youtube.com/watch?v=uQ0SRdtOptk
အိမ်ဖြူတော်သို့ သွားရောက်ရန် ဘရာဇီးလ်သမ္မတ ပြန်လည်သုံးသပ်
By miemiekhine 3007 days ago on နိုင်ငံတကာ from news.yatanarpon.com.mm
အမေရိကန် အမျိုးသား ထောက်လှမ်းရေးဌာန (NSA) က ဘရာဇီးလ် အစိုးရအပေါ် လျှို့ဝှက် ထောက်လှမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲချက်များကြောင့် ဘရာဇီးလ်သမ္မတ ရူဆွတ်ဖ်ဒယ်လ်မာ အနေဖြင့် အိမ်ဖြူတော်သို့ သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်အပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ် စဉ်းစားနေကြောင်း သိရှိရသည်။ NSA အနေဖြင့် သူမ၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အီးမေးလ်များကို ကျူးကျော် ထောက်လှမ်းခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲမှုများအပေါ် ဒယ်လ်မာက ဒေါသထွက်နေပြီး အောက်တိုဘာလတွင် ဝါရှင်တန်၌ အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရတ်အိုဘားမားနှင့် တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်ဖွယ် ရှိနေကြောင်း ဘရာဇီးလ်အစိုးရ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။NSA သည် ဘရာဇီးလ်အပြင် မက္ကစီကို အစိုးရကိုပါ အလားတူ
ဆီးရီးယားကို တိုက်ခိုက်မည့် အစီအစဉ် အမေရိကန် လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေး
အမေရိကန် ဥပဒေပြု လွှတ်တော် အမတ်များသည် သမ္မတ ဘာရတ်အိုဘားမား၏ ဆီးရီးယားအပေါ် စစ်ရေးဖြင့် အရေးယူ တိုက်ခိုက်လိုမှုကို ထောက်ခံမည့် မူကြမ်းတစ်ခုကို စတင်ရေးဆွဲနေပြီ ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါနေ့ ညပိုင်းက စတင်ကာ အဓိက နိုင်ငံရေး အင်အားစုများဖြစ်သည့် ရီပတ်ဘလစ်ကန်နှင့် ဒီမိုကရက်ပါတီမှ အမတ်များက မူကြမ်းအတွက် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်နေကြောင်း သိရသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီက နှစ်ဖက်ပါတီ အမတ်များအား ကမ္ဘာ့ရေးရာများကို မျက်နှာလွှဲပြီး တသီးတခြား ရပ်တည်နေလိုသည့် ဝါဒမျိုး ကိုင်ဆွဲမထားရန် အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန်၏ စစ်ဆင်ရေး စီမံကိန်း မူကြမ်းကို တိုင်ပင်နှီးနှောနေခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် အမေရိကန်၏ စစ
By zawminnaing 3007 days ago on နိုင်ငံတကာ from news.yatanarpon.com.mm
ဆီးရီးယားတွင် ဆာရင် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုခဲ့ဟု အမေရိကန် စွပ်စွဲ
By maungmaung 3007 days ago on နိုင်ငံတကာ from news.yatanarpon.com.mm
ဆီးရီးယား နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသော ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုတွင် ဆာရင် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အမေရိကန် အစိုးရက စွပ်စွဲလိုက်သည်။ ဩဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့က ဒမတ်စကက် မြို့တော်အနီးတွင် ဖြစ်ပွားသော ဓာတုလက်နက် အသုံးပြု တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီက မိမိတို့သည် နမူနာ အထောက်အထားများကို လေ့လာ အတည်ပြုပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ခြင်းဟု ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရတ်အိုဘားမားသည် ဆီးရီးယားကို စစ်ရေးအရ အရေးယူရန် သင့်မသင့် လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းမည်ဟု ပြောဆိုထားသည့်နောက် ကယ်ရီက ဆီးရီးယား အရေးနှင့် ပတ်
လန်ဒန်မြို့မှ နော့တင်ဟေးလ် ကာနေဗယ်လ် ပွဲတော်
By jackiekyaw 3008 days ago on နိုင်ငံတကာ from news.yatanarpon.com.mm
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၊ ကန်ဆင်တန်နှင့် ချယ်လ်ဆီး အရပ်ရှိ လမ်းမများပေါ်တွင် နှစ်စဉ် ပြုလုပ်မြဲဖြစ်သည့် နော့တင်ဟေးလ် ကာနေဗယ်လ် ပွဲတော်ကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ပွဲတော်ကို (၁၉၆၆) ခုနှစ် ကတည်းက ပုံမှန် ကျင်းပလာခြင်း ဖြစ်သည်။ နော့တင်ဟေးလ် ကာနေဗယ်လ်သည် လူအများ လမ်းပေါ်ထွက်လာကာ ကျင်းပကြသည့် ဥရောပ၏ အကြီးဆုံး ပွဲတော်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင်မူ (၂) ရက်ကြာ အချိန်သတ်မှတ် ကျင်းပခဲ့သည်။ ကာရေဘီယန် ဒေသတွင် ခေတ်စားသည့် ကာနေဗယ်လ် ပွဲတော်များကဲ့သို့ပင် လှပဆန်းကျယ်စွာ တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် တန်ဆာဆင်ထားသော ဘီကနီများ၊ ငှက်မွှေးငှက်တောင်နှင့် အလှဆင်ထားသည့် ဖက်ရှင်များ၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ
Facebook ပေါ်ကကျောင်းသားများကို မြှူဆွယ်သည့်ဆရာမအားဖမ်းဆီး
By jackiekyaw 3008 days ago on နိုင်ငံတကာ from www.maukkha.org
နာမည်ကျော် လူမှုကွန်ရန် Website တစ်ခုဖြစ်သည့် Facebook ကွန်ရက်ပေါ်ကတစ်ဆင့် ကျောင်းသားများအား လိင်ကိစ္စမြှူဆွယ်သော ဆရာမတစ်ဦးကို တာဝန်ရှိသူများက ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း USATody သတင်းတွင် ဖော်ပြထား သည်။ဖလော်ရီဒါတောင်ပိုင်း အထက်တန်းကျောင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်ရှိ စတီဗီ ဂလပ်စ်ပူး ဆိုသူသည်၊ ဖလော်ရီဒါ၊ ဘိုကာရေတန်ရှိ မိမိနေအိမ်တွင် ကျောင်းသားများ မိမိနှင့်အတူ လာရောက်အိပ်စက်ရန် Facebook ပေါ်ကတစ်ဆင့် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည့်အပြင် မိမိထံတွင် ဆေးခြောက်များကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း ရေးသားထားသဖြင့် ထိုသို့ ဖမ်းဆီးအရေးယူရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဘရိုးဝပ်ရဲစခန်းတာဝန်ခံအရာရှိက ပြောကြားသည်။Facebook ပေါ်ရှိ သူမ၏စာ
iPhone အဟောင်းတွေကို အသစ်နဲ့ လဲပေးတဲ့ အစီအစဉ်
By jackiekyaw 3008 days ago on နိုင်ငံတကာ from www.myawady.com.mm
CNBC သတင်းဋ္ဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ Appleဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ “iPhone Trade-In” အစီ အစဉ်ကို ယနေ့မှ စပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ Apple လက်လီဆိုင်တွေမှာ စတင်နေပြီလို့ သိရှိရပါ တယ်။ iPhone တွေကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ရေးလို့ အမည်တပ်ထားပြီး အစီအစဉ်ရဲ့ ကနဦး အစအနေနဲ့ Customer တွေဟာ အမေရိကား တစ်လွှားမှာ ရှိတဲ့ Apple စတိုးတွေမှာ iPhone အဟောင်း တစ်လုံးကိုယူလာပြီး အသစ်တစ်လုံး ရရှိရန် Store Credit ကို လက်ခံ သိမ်းဆည်း ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Customer တွေဟာ အဆိုပါ အစီအစဉ်ရဲ့ အကျိုးကို ခံစားရဖို့ အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေ့စွဲနဲ့ သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးထား ရမှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါနေ့ရက် ကျော်လွန် သွားလို့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အလုပ်မလုပ်တော့
အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်သည့် ဥပဒေ ဆော်ဒီတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြဋ္ဌာန်း
By nyomyint 3009 days ago on နိုင်ငံတကာ from news.yatanarpon.com.mm
ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများ အတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ အကာအကွယ်ပေးမည့် ပြည်တွင်း ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးက အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသရှိ ဩဇာကြီးမားသော နိုင်ငံအတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးငယ်များနှင့် ပြည်တွင်း လုပ်သားများကို အကြမ်းဖက်မှုမှ အကာအကွယ်ပေးမည့် ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းမှုကို ယခုအခါ အတည်ပြု လက်ခံလိုက်ပြီဟု ပြောကြားသွားသည်။ အနိုင်ကျင့် ညှင်းပမ်းမှုမှ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဟု အမည်ပေးထားသော ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ဘာသာရေး စောင့်ထိန်းမှု ပြင်းထန်လွန်းသည့် နိုင်ငံအတွင်း ထူးခြားသော အပြောင်းအလဲ တစ်ရပ် အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။အစိုးရအ
လိင်တူ စုံတွဲများ ပထမဆုံး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် Tango ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်
အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Tango အက ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲတွင် ထူးထူးခြားခြား အခြေအနေ တစ်ရပ်အဖြစ် လိင်တူ စုံတွဲအချို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဗျူနိုအေးရီးစ်မြို့ရှိ လူနာပါ့ခ် အားကစားရုံကြီးတွင် ကျင်းပသော ပြိုင်ပွဲကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ (၃၇) ခုမှ စုံတွဲ (၅၀၀) ကျော် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပြိုင်ပွဲတွင် အများ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အိမ်ရှင် အာဂျင်တီးနားမှ စုံတွဲများပင် အကောင်းဆုံး အက အရည်အသွေးများဖြင့် အောင်ပန်းဆင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဂျက်ဆီကာ အာဖန်နိုနီနှင့် မက်စီမီလီယာနို ခရစ္စတီယာနီတို့ စုံတွဲသည် အကောင်းဆုံး အကအလှများဖြင့် ဒိုင်များ၏ အံ့ဩချီးကျူးမှုကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး Sa
ဆီးရီးယားအရေး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှင်းလင်းပြောကြား
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီသည် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆီးရီးယားအရေး ရှင်းလင်းပြောကြားမှု တစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းက အမေရိကန်၏ ထောက်လှမ်းရေး သတင်းအချက်အလက်များအရ သြဂုတ် ၂၁ ရက်က ဒမတ်စကက်မြို့အနီး ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကို ဆီးရီးယား အစိုးရက ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ထို့အပြင် ဆီးရီးယားသမ္မတ အာဆတ် အစိုးရက ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် ၃ ရက်ကြာ အချိန်ယူ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး သတင်းများက ဖော်ပြသည်ဟုလည်း ဂျွန်ကယ်ရီက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဆီးရီးယားတွင် သြဂုတ် ၂၁ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကလေးငယ် ၄၂၆ ဦး အပါအဝင်
ကွန်ဂို စစ်တပ်က ပစ်လွှတ်သည့် ဗုံးဆံများ ရဝမ်ဒါ ပိုင်နက်အတွင်း ကျရောက်ဟုဆို
ကွန်ဂိုစစ်တပ်က မိမိတို့၏ ပိုင်နက်ထဲသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ကျူးကျော် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ရဝမ်ဒါ အစိုးရက စွပ်စွဲ ပြောကြားလိုက်သည်။ ကြာသပတေးနေ့က နယ်ခြားဒေသ အနီးတွင် ကွန်ဂိုဘက်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော လက်နက်ကြီး ကျည်ဆန်များ ကျရောက် ပေါက်ကွဲသဖြင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦး သေဆုံးကာ သူမ၏ ကလေးငယ် ထိခိုက် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း ရဝမ်ဒါက စွပ်စွဲလိုက်သည်။ (၂) ရက်အတွင်း ရဝမ်ဒါ မြေပိုင်နက်သို့ ဗုံးဆန် အလုံး (၂၀) ထက်မက ကျရောက်ခဲ့ပြီး ယင်းကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုး ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါက မိမိတို့ ဆက်လက် သည်းခံနေတော့မည် မဟုတ်ဟုလည်း ရဝမ်ဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လူဆီမူရှီကီဝါဘိုက သတိပေး ကြေညာလိုက်သည်။ကွန်ဂိုစစ်ဘက်မှ အရာရှိ တစ်ဦးကမူ အဆိုပါ
ပင်လယ်ရေကြောင်း သွားလာမှု လွတ်လပ်ခွင့်များ အဓွန့်ရှည်ရန် အမေရိကန်နှင့် ဖိလစ်ပိုင် သဘောတူ
အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသအတွင်း တရုတ်နှင့် အခြားနိုင်ငံများကြား ပင်လယ်ရေပြင် ပိုင်နက်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားနေသည့် အတောအတွင်း အမေရိကန်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့က ပင်လယ်ရေကြောင်း သွားလာမှု လွတ်လပ်ခွင့်များ အဓွန့်ရှည်စေရန် သဘောတူ လိုက်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အမေရိကန်စစ် ဦးစီးချုပ်များသည် မကြာမီက တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီးနောက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် အမေရိကန်စစ်ရေးအင်အား တိုးချဲ့ချထားရေးကို သဘောတူခဲ့ပြီး ယင်းသို့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အီမန်နျူရယ် ဘော်တစ်စတာနှင့် ကန်ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မာတင်ဒမ့်ပ်ဆေးတို့ ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ခ
By aungaung 3012 days ago on နိုင်ငံတကာ from news.yatanarpon.com.mm
မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဟု အင်ဒို အတည်ပြု
By kyawswaraung 3013 days ago on နိုင်ငံတကာ from news.yatanarpon.com.mm
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲအတွက် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများက ကန့်ကွက်မှုများ ရှိခဲ့သည့်တိုင် အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်းမည် မဟုတ်ဟု အတည်ပြု ကြေညာခဲ့သည်။ မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရေး တာဝန်ရှိသူများက လာမည့်လတွင် ကျင်းပရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ပြိုင်ပွဲအတွက် အစီအစဉ်များ လုံးဝ အပြောင်းအလဲ မရှိဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် အများအပြား နေထိုင်သည့် အင်ဒိုတွင် နိုင်ငံ၏ ဩဇာကြီးမားသော အစ္စလာမ်မစ် အဖွဲ့ချုပ်က ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ လက်ရွေးစင် မိန်းမချောလေးများက စင်မြင့်ထက်တွင် ကိုယ်ဟန်ပြမည့် ပြိုင်ပွဲသည် ဘာသာရေး အမြင်အရ မသင့်တော်ကြောင်း ဝေဖန် ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အြေ
တရုတ်အပေါ် အမေရိကန်၏ ကင်းထောက်မှုများက တင်းမာမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေဟု တရုတ်စစ်ဘက် သတိပေး
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ အနီးတစ်ဝိုက် ဒေသများတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ သူလျှိုပြုလုပ် စောင့်ကြည့်မှုများ တိုးမြှင့်လာက နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး တင်းမာမှုများကို မြင့်တက်စေနိုင်သည်ဟု တရုတ်အကြီးတန်း စစ်ဘက်အရာရှိကြီးများက ထုတ်ဖော် သတိပေးလိုက်ကြောင်း China Daily သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် တရုတ်ရေပိုင်နက် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းမှ သူလျှိုလုပ် စောင့်ကြည့်မှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တရုတ်အစိုးရက နှစ်နိုင်ငံအကြား ရှိထားသော ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး အန္တရာယ်ကြီးမားသော လုပ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ကြောင်း တရုတ်စစ်တပ်မှ အကြ